CUMAR FILISH: “Shabaab abaabulan ayaa doonaya inay Muqdisho soo weeraraan” – Maanta Online
CUMAR FILISH: “Shabaab abaabulan ayaa doonaya inay Muqdisho soo weeraraan”
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Max’ed (Filish) ayaa markii ugu horeysay kormeer waxa uu ku tegay Kontroolada laga soo galo Muqdisho, isagoona kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha iyo ciidamada ammaanka ee halkaasi ku sugan.
Cumar Filish oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu isku dayayo sidii uu u waxyeeleyn lahaa amniga iyo xasiloonida magaalada Muqdisho, isagoona sheegay in gacanta lagu soo dhigay rag Al-Shabaab ka tirsan oo damacsanaa inay dilal qorsheysan ka geystaan degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir.
“Shabaab abaabulan ayaa doonaya inay Muqdisho weerar ku soo qaadaan, balse hamigooda ma suurageli doono” ayuu yiri Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo dilay askar ka tirsan ciidamada nabadgelyada.
Guddoomiye Cumar ayaa kula dardaarmay ciidamada inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah, isla markaana ay kordhiyaan howlgaladooda ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo uu sheegay in kuwa nolosha lagu soo qabto la hor geynayo cadaaladda.
Dhinaca kale Cumar Filish ayaa sheegay in Al-Shabaab iyagoo sheeganaya inay diin wadaan, hadana dadkii ku dilayaan taasi oo uu sheegay inaysan ka dhicin dalalka Islaamka intooda badan, hase yeeshee waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan ku nasan doonin isla markaana afkaarahooda ka hirgelin karin bacdamaa la wiiqay awoodii ay horay u lahaayeen.
← Madaxweynihii hore ee Mareykanka oo ka digay khatar ku soo wajahan xisbiga Dimoqoraadiga
C/qaasim Salaad oo ka hadlay khudbadii dhiillada xambaarsaneyd ee Shariif Sh. Axmed →
Sarkaal Al-Shabaab u qaabilsanaa amniyaadka oo xalay lagu qabtay Muqdisho
Maamulka G/Hiiraan oo Go’aan ka gaaray dhibaato ka jirtay Baladweyne